Rasmi: Raid todobaadkiisa afaraad ganacigiisa iyo Hichki todobaadkiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: Raid todobaadkiisa afaraad ganacigiisa iyo Hichki todobaadkiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyay
April 13, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: April 13, 2018
Superstar Ajay Devgn filimkiisa Raid ayaa keenay 2.75 crore todobaadkiisa afaraad taasi oo ka dhigan in ganacsigiisa uu haatan maraayo 96.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday.
Raid waa filim HIT ah balse 100 Crore ma gaari doono wuu ka gaabin doonaa wuxuuna ganacsigiisa gabo gabada ku dhow ku darsan karaa 1 Crore ilaa 2 Crore taasi oo ka dhigan 97.50 Crore ilaa 98 Crore inuu ku istaagi doono ganacsigiisa.
Fadlan hoos kaga bogo Raid mudo afar todobaad ah ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka kowaad – 59.86 Crore (Rasmi)
Todobaadka labaad – 25.17 Crore (Rasmi)
Todobaadka sedexaad – 8.75 Crore (Rasmi)
Todobaadka afaraad – 2.75 Crore (Qiyaas)
Wadarta Guud – 96.53 Crore (Trade Figure)
Rani Mukerji filimkeeda Hichki ayaa keenay 4 Crore todobaadkiisa sedexaad taasi oo ka dhigan wadarta guud in mudo sedex todobaad ah filimkaan soo xareeyay 42.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday.
Filimka Hichki ganacsigiisa 50 Crore wuu ka gaabin doonaa balse 44 Crore ilaa 45 Crore ganacsi u dhaxeeyo ayuu sameyn doonaa waana film HIT ah.
Hichki wuxuu 10 Crore ganacsi ahaan dheeraan doonaa Rani filimkeedii ugu dambeeyay Mardaani sidoo kalena 12 Crore wuxuu dheeran doonaa Vidya Balan filimkeedii ugu dambeeyay Tumhari Sulu oo ahaa filimkii ugu dambeeyay atirisho weyn hogaamiye ka ahayd.
Fadlan hoos kaga bogo Hichki iyo mudo sedex todobaad ah ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka kowaad – 26.11 Crore (Rasmi)
Todobaadka labaad – 12.30 Crore (Rasmi)
Todobaadka sedexaad – 4 Crore (Qiyaas)
Wadarta Guud – 42.41 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 587